ပြဿနာ အများဆုံး အစိုးရ (Editorial) - News @ M-Media
Hate Crime စောငျ့ကွညျ့ရေး
ပြဿနာ အများဆုံး အစိုးရ (Editorial)
in EDITORIAL — May 25, 2015
မေ ၂၅ ၊ ၂၀၁၅
စကတည်းက ယဉ်သကို ဆိုတာလိုပါပဲ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အဖြစ်က အသေ၀နာစ ဗာလာနံဆိုပြီး လူ့ဗာလတွေနဲ့ကင်းဝေးစေဖို့ ဒီမိုကရေစီဂါထာစီးဖြန်း မန်းမှုတ်လာခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ကံဆိုးချင်တော့ ဗွီလိန် က မင်းသားဝတ်စုံပြောင်းပြီး ထွက်လာတဲ့အခါ ဗာလာနဉ္စ သေ၀နာရယ်လို့ မင်္ဂလာတရားတော်ကို ကမောက်ကမလုပ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒီမှာတင် အမင်္ဂလာနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကင်ပွန်းတပ်ပွဲဟာ အခြေမလှ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မှ NLD က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်မပေးရင် ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်မယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူညီရင် ရွေးကောက်ပွဲပျက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဧရာဝတီသင်္ဘောကုမ္ပဏီနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးနာအောက်ရဲ့ သနားစဖွယ်အဖြစ်ကို သံဝေဂ မယူမိလေသလားပဲ။ အများ အကျိုးထက် တစ်ကိုယ်ရေ အကျိုးရှာတဲ့ အချောင်သမားက ရာနှုန်းများနေလေတော့ NLD ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဟာ ဦးနာအောက်ရဲ့ အရှုံးမျိုးနဲ့ ပြာကြွေစလို လွင့်ပြယ်ဆုံးပါးခဲ့ရပါတယ်။
ဘောင်းဘီချွတ်များရဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဟာ ပြိုင်ဘက်တော်ရဲ့သပိတ်ကို လူနာမျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ အပြုံးမျိုးနဲ့ ပီတိဝေနေချိန်ပေါ့။ ချန်ပီယံမပါတဲ့ပွဲမို့ ပွဲချောင်ဝင်တိုးဦးမှဆိုတဲ့ တောကြောင်တွေကလည်း လက်ခမောင်း ထခတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၀ ဟာ ပြည်သူမျှော်မှန်းတဲ့ အောင်ပန်းတွေ ခြွေချကြေမွမြေခ သွားရပါတော့တယ်။
အဲဒီကာလမှာ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေသွန်းတဲ့ ခါတော်မီခင်းတဲ့ တစ်ခြမ်းတစ်ဝက် လမ်းအကွက် အကွက် တွေကို ပြန်မြင်ယောင် မိပါသေးတယ်။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကို ပါတီပိုင်လို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ထင်တိုင်းသုံး မဲဆွယ်နေတဲ့ အရွေးခံ အမတ်လောင်းများကိုလည်း ပြန်မြင်ယောင်မိပါသေးတယ်။ မဲရုံမှာ မဲရေတုန်းက အနိုင်၊ ကြိုတင်မဲတွေ ထင်သလိုပေါင်းပြီး သတင်းမှာကြေညာတော့ အရှုံးဖြစ်သွားတဲ့ အရွေးခံတချို့ရဲ့ တက်ခေါက်သံ တွေကိုလည်း ကြားယောင်မိပါသေးတယ်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေကာတာကိစ္စဟာ စနက်တံဖြုတ်ထားတဲ့ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်ထား မိသလို ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကလေးကို အချိုသပ်သလို ပြည်တော်ပြန် ပုဏ္ဏားတို့ရဲ့ မာယာဉာဏ်နဲ့ ရွှေ့ဆိုင်းနှစ်သိမ့်ဖို့ အကြံအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့ သမ္မတကြီးဟာ နေ့ချင်းညချင်း နာမည်ကောင်း လက်မှတ် အချောင်ရသွားပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူထုခေါင်းဆောင် ဘ၀ကနေ နိုင်ငံရေးသမားဘ၀ကို ပြောင်းလဲခံယူဖို့အတွက် သမ္မတကြီးကို ယုံတယ်ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ သမ္မတကို ကျောသပ်လိုက်ချိန်မှာ ဘုမသိ ဘမသိတွေက သမ္မတကြီးကို ဘုရားတစ်ဆူ ဂူတစ်လုံးလို အကြည်ညို ပိုသွားကြပြန်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီးတွေ ပိုလျှံနေလို့ နိုင်ငံခြားတောင် ရောင်းစားနေရပါတယ်ဆိုတဲ့ ၀န်ကြီးက နှုတ်သရမ်းထားချိန်မှာ လျှပ်စစ်မီးတွေ ပျက်လွန်းလို့ ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဆုတောင်းပွဲတွေကလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ မှတ်တိုင် တစ်ခုပါပဲ။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ အမေရိကန်အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရလိုပါတယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖြေလျှော့စေ လိုတယ်။ ဧရာဝတီ ကိစ္စမှာ နာမည်ကောင်းရထားတာ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အဆင်ပြေနေတာတွေ အပြင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ်လွှတ်ပေးတာတွေဟာ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ထောက်ခံမှုရရေး အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ ထောင်ကလွတ်လို့ အင်အားကောင်းလာရင် ချိန်ခွင်လျှာညှိနိုင်အောင် မိစ္ဆာဘက်တော်သား တချို့ကိုလည်း ရောင်တော်ပြန်နဲ့ ရောလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အထိကရုဏ်းဖန်တီးမှု ၀ိဇ္ဇာတွေလည်း ပါပါတယ်။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အစိုးရ မျက်ခုံးလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ၀င်ပြိုင်သမျှ နေရာတိုင်းမှာ NLD အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာတင် ၂၀၁၅ အတွက် ကြိုတင်စီမံကိန်း တစ်ခုကို ချရပါတော့တယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁ မှာ လုပ်ပါတယ်။ ဧပြီ ၁၂ မှာ ဆိုင်းတောင်၊ ဧပြီ ၁၃ မှာ ကံမ ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေးပြဿနာတွေ စပြီးမွှေးပါတယ်။ နောက်တော့ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ အကြီးအကျယ်ဖန်တီးပါတယ်။ အဲဒီကနေ သာကေတ၊ လှိုင်သာယာ၊ မိတ္ထီလာ၊ ပဲခူးမြို့အနောက်ဘက် တစ်လွှား၊ ဥက္ကံ၊ လားရှိုး၊ မန္တလေးစသဖြင့် ပဋိပက္ခတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဖန်တီးကြောင်းလည်း လက်ရာတွေတူနေပုံအရ ပြည်သူတွေ ရိပ်စားမိလာပါတယ်။
လက်ပံတန်းတောင်ကိစ္စ၊ ကိုပါကြီးကိစ္စ၊ ကချင် ဆရာမလေးနှစ်ဦး ကိစ္စ၊ ဒေါ်ခင်ဝင်း ကိစ္စ၊ မိကျောင်းကန် မြေသိမ်းခံများအပါအ၀င် အရပ်ရပ် အနယ်နယ်က မြေသိမ်းယာသိမ်း ကိစ္စ၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ကျောင်းသား တွေကို လက်ပတ်နီတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ကိစ္စ၊ လှိုင်သာယာ အလုပ်သမား သပိတ်ကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းတဲ့ကိစ္စ၊ လက်ပံတန်းမှာ ကျောင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ကိစ္စ အဲဒီလို ကိစ္စမြားမြောင် ပြဿနာ အစုံစုံကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်ခု အဖြေမထွက်ခင် သည့်ထက်သည့်ထက် ပိုပိုကြီးတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ ဖုံးကွယ် အာရုံပြောင်းပစ်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ခေါင်းလောင်းထဆယ်ချင်လည်း ဆယ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ အရည်အသွေး မပြည့်မီတဲ့ ၀န်ကြီးများဖြစ်ကြောင်း ထမင်းတစ်နပ်လျှော့စားခိုင်းတာ၊ တစ်နေ့ ၂၀၀၀ ပဲ သုံးဖို့ပြောတာ၊ တရုတ်ပြည်ကို ရောင်းထားတဲ့ လျှပ်စစ်မီးကို ပြန်ဝယ်ပြီး သုံးရမယ်ဆိုတာ၊ နယ်လှည့် ပါးရိုက်မယ်ဆိုတာတွေက သက်သေပြနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒီအစိုးရဟာ စိတ်ပျက်စရာ အကောင်းဆုံးအစိုးရ၊ ပြဿနာ အများဆုံး အစိုးရအဖြစ် ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကနေစပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ပြဿနာတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အစိုးရရဲ့ လက်မည်းကြီး ရှိနေကြောင်း ပြည်သူတွေက ကောင်းကောင်းသိလာခဲ့ပါပြီ။ အခု ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် နောက်ထပ် ဘာ ပြဿနာတွေ ဖန်တီးဦးမလဲဆိုတာသာ ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ စောင့်ဆိုင်းကြည့်ကြရဦးမှာပါ။
ဒီလိုပြဿနာတွေဆက်ပြီး မကြုံတွေ့ရတော့မှာကို စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံး အကြံတစ်ခု ပေးပါ့မယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုသာ မဲပေးလိုက်ကြပါတော့။
အမြိုးသားရေးအစှနျးရောကျမြားအား ပွုပွငျပေးမညျ့အစီအစဥျကို ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ စတငျမညျ
မွှကြှေနျးကို ရုရှားလကျထဲကနေ ယူကရိနျးက ဘယျလိုပွနျသိမျးခဲ့သလဲ
စဈကောငျစီ တိုကျလယောဥျ ကြူးကြျောမှု ထိုငျးဘာပွောသလဲ
နာမညျကြျော ပွညျတှငျးဖွဈ ဒရုနျး ၃ စငျးကို တူရကီက ယူကရိနျးထံ လကျဆောကျပေး
ဗီယကျနမျ၏ ၃ လပတျ စီးပှားရေးတိုးတကျမှု ၁၁ နှဈအတှငျး အမွငျ့ဆုံးရောကျ
mgoakker: PEACE BE UPON YOU, I like Ko Then Min Htike's features. :) G…
Afghanistan anti_Muslim_in_Myanmar Bangladesh China DailySportNews DailySportsNews Egypt EPL EPL 2015-16 EPL 2016-2017 featured India indonesia international short news Iran iraq Israel Japan malaysia Man U Minority In Myanmar MyanmarCoup2021 Myanmar Military north korea opinion Pakistan Palestine Philippines PremierLeague Rakhine State Rohingya russia SaudiArabia ShortNews singapore South Korea Syria thailand turkey UAE UK US US Muslims WuhanVirus Yangon
Categories Select Category Advertising (5) Dubai (2) EDITORIAL (14) English Version (45) M-Media Blog (113) ကဗျာ (77) အစ္စလာမ်အေးရိပ် ဆာယာသို့ (18) M-Media Movies Guide (2) M-Media စာအုပ်စင် (23) M-MediaNewsLetters (15) Media To Monitor (116) Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး (26) ပြည်တွင်း (26) Our Perspectives (95) Uncategorized (2) ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများနှင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ (19) ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ (542) ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ (210) ထူးချွန်လူငယ် (16) ရဲဘော်ကိုထွေး (6) ဦးရာဇတ် (23) ပညာရေး (91) မိုးလေ၀သ (4) ရင်ဖွင့်လွှာ (3) သတင်းများ (18,426) Analysis (7) Interview (146) Weekly News (2) ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ (1,634) ကာတွန်း (50) ဓါတ်ပုံသတင်း (92) ရုပ်သံသတင်း (62) သတင်းသုံးသပ်ချက် (2) သတင်းဆောင်းပါး (136) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (574) သူ့အမြင် (220) အားကစား (2,719) ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် (18) ပြည်သူ့အသံ (23) မြန်မာသတင်း (4,507) နိုင်ငံတကာသတင်း (9,594) အာဖရိက (494) အာရှ-ပဖိဖိတ် (3,219) အမေရိက (1,102) အရှေ့အလယ်ပိုင်း (2,295) ဥရောပ (1,088) သုတ၊ရသနှင့်အထွေထွေ (1,391) Essay (1) M-Media Knowledge (35) Quote (16) ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ (128) ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ (30) ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် (6) စာတမ်း (5) ဘာသာပြန် (161) ရသစာပေ (4) ဝတ္ထုတို (6) သုတ၊ရသ (57) သရော်စာ (29) ဆောင်းပါး (870) ထွေရာလေးပါး (84) ပေးစာ/ပြန်စာကဏ္ဍ (26) ကြေငြာချက် (59) နှလုံးသားအာဟာရ (29) သူတို့ပြောသမျှ သူတို့အကြောင်း (2) အမှားပြင်ဆင်ချက် (2) အနုပညာ (2) မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်သမိုင်း (52) Kaman (1) Masjid In Myanmar (1) သမိုင်းထဲက ပုံရိပ် (17)
Archives Select Month July 2022 (4) June 2022 (24) May 2022 (49) April 2022 (38) March 2022 (68) February 2022 (54) January 2022 (49) December 2021 (79) November 2021 (68) October 2021 (59) September 2021 (67) August 2021 (68) July 2021 (61) June 2021 (74) May 2021 (64) April 2021 (77) March 2021 (62) February 2021 (60) January 2021 (79) December 2020 (99) November 2020 (48) October 2020 (65) September 2020 (79) August 2020 (56) July 2020 (59) June 2020 (63) May 2020 (71) April 2020 (91) March 2020 (77) February 2020 (84) January 2020 (88) December 2019 (70) November 2019 (71) October 2019 (89) September 2019 (81) August 2019 (67) July 2019 (88) June 2019 (75) May 2019 (85) April 2019 (85) March 2019 (76) February 2019 (99) January 2019 (78) December 2018 (76) November 2018 (77) October 2018 (128) September 2018 (122) August 2018 (126) July 2018 (155) June 2018 (119) May 2018 (151) April 2018 (156) March 2018 (141) February 2018 (125) January 2018 (131) December 2017 (148) November 2017 (162) October 2017 (215) September 2017 (200) August 2017 (210) July 2017 (209) June 2017 (201) May 2017 (196) April 2017 (205) March 2017 (203) February 2017 (211) January 2017 (245) December 2016 (235) November 2016 (276) October 2016 (265) September 2016 (244) August 2016 (252) July 2016 (242) June 2016 (290) May 2016 (242) April 2016 (254) March 2016 (283) February 2016 (284) January 2016 (329) December 2015 (341) November 2015 (358) October 2015 (417) September 2015 (303) August 2015 (277) July 2015 (268) June 2015 (293) May 2015 (302) April 2015 (238) March 2015 (266) February 2015 (260) January 2015 (282) December 2014 (262) November 2014 (255) October 2014 (273) September 2014 (226) August 2014 (233) July 2014 (246) June 2014 (217) May 2014 (249) April 2014 (280) March 2014 (264) February 2014 (255) January 2014 (326) December 2013 (291) November 2013 (257) October 2013 (255) September 2013 (203) August 2013 (233) July 2013 (233) June 2013 (206) May 2013 (172) April 2013 (114) March 2013 (153) February 2013 (70) January 2013 (96) December 2012 (101) November 2012 (130) October 2012 (168) September 2012 (82) August 2012 (118) July 2012 (93) June 2012 (76) May 2012 (53) April 2012 (31) March 2012 (24) February 2012 (8) January 2012 (13) December 2011 (19) November 2011 (10) October 2011 (11) September 2011 (12) August 2011 (33) July 2011 (28) June 2011 (7) May 2011 (15) April 2011 (9) March 2011 (8) February 2011 (12) January 2011 (15) December 2010 (16) November 2010 (21) October 2010 (29) September 2010 (30) August 2010 (4)
Copyright © 2022 — News @ M-Media. All Rights Reserved. Designed by WPZOOM